ကျန်းမာတဲ့အသားအရေများအတွက်3နနွင်းကုသမှု - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား ကျန်းမာတဲ့အသားအရေအတွက် "3 နနွင်းကုသမှု - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
သငျသညျနနွင်းနှင့်အတူအချို့သောကုသအရေပြားများအတွက်အကျိုးရှိသောဖြစ်မည်အကြောင်းသိကြသလား? ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတစ်လက်ဖြစ်စေဂုဏ်သတ္တိများငြိမ်းစေလျက်ဤသည်အံ့သြဖွယ်အမွှေးအကြိုင် cache ကို များစွာသောအခြေအနေများသည်။
နနွင်းနှင့်အတူဤအကုသ တိုးတက်စေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်သဘာလမ်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာ, ဝက်ခြံ, မျက်နှာ photoaging သို့မဟုတ် Alopecia။ ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းပြင်ဆင်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်ထွက်ရှာပါ။
နနွင်း (Curcuma longa) ယဉ်ကျေးမှုများစွာ၏အစားအစာအတွက်အလွန်ဘုံအမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းလျာများ၏အရသာကိုနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုပိုကောင်းသည့်ပြင်းထန်သောအဝါရောင်အရောင်, အပြင်, ဒါကြောင့်လည်းသူ့ရဲ့ဓါတ်တိုး, Anti-inflammatory နဲ့မွှားများအတွက်အသိအမှတ်ပြု။ နနွင်းလည်းအကျိတ်ဆဲလ်များ၏ပြန့်ပွားကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးသည်။
ဤအအစွမ်းထက်သီလနှင့်အတူ, နနွင်းနှင့်အတူအချို့သောကုသအသားအရေပြဿနာတွေတိုးတက်လာဖို့ထိရောက်တဲ့နှင့်သဘာလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအကုစားဖို့အဓိကသော့ချက် curcumin, နှစ်ဦးစလုံး Topic နှင့်နှုတ်ကြောင်းကိုတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: Curcumin ဒီဆေးတွေအဖြစ်ထိရောက်သောသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြစ်ပါတယ် 7
1 ။ ဝက်ခြံပုန်းများ
အဆိုပါဆန့်ကျင်သောဤနနွင်းကုသမှု၏ပထမဦးဆုံးဝက်ခြံပုန်းများ အခြေခံသည် ဒီအမွှေးအကြိုင်များ၏ Anti-inflammatory နဲ့ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်။ ထို့အပြင်အချို့သောလေ့လာမှုတွေကဒီအခြေအနေပေါ်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအသေးစိတ်ပါပြီ။
အဆိုပါကိုးကားသုတေသနဖြစ်သည့်အကြောင်း အဆိုပါကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျ၏ထုတ်ယူင်တစ်ဦးမုန့်များ၏လျှောက်လွှာ၏ထိရောက်မှုကို။ အထူးသဖြင့်, သူက "ကိုဖြစ်နိုင် ဝက်ခြံနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများနှင့်အတူလူအတွက်အလွန်အကျွံ sebum လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းညှိ"။
နနွင်းထုတ်ယူ (1 ml) ၏5လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ် (100 ဆ) ၏½ခွက်ကို
အဆိုပါအမွှေးအကြိုင်ထဲမှာလုံးဝပျော်အထိဤကိုးကွယ်ရာပြင်ဆင်ထားရန်, ရိုးရိုးနှစ်ခုပါဝင်ပစ္စည်းများရောမွှေ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်.
ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်အအေးခန်းစောင့်ရှောက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ယင်းကိုးကွယ်ရာအအေးလျှင်လည်း, ၎င်း၏ပြော့နဲ့ anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခိုင်ခံ့စေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အိပ်ရာမသွားမီ, ကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်အရေပြားသန့်စင်များနှင့်ညဦးယံ၌ပြီးမှ, နံနက်ယံ၌ Apply
2 ။ facial photoaging
Le မျက်နှာ photoaging ပါဝင်ပါသည် နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကြောင့်အရေပြားဓာတ်တိုး။ အချိန်မတန်မီအိုမင်းတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအတွင်းမှထွက်ခြင်း, antioxidants ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထိုကွောငျ့, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာချမှတ်အပြင်ကျနော်တို့ Topic ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့ဖွယ်အမွှေးအကြိုင်သုံးပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့ဗီတာမင် E ကိုနောက်ထပ်အစွမ်းထက် antioxidant နှင့်အတူပေါင်းသင်း။
ဗီတာမင်အီး၏½ခွက်ကို (100 ml)
Apply နှင့်တစ်ခုလုံးကိုမကျြနှာကိုကျော်ညင်ညင်သာသာ massage ။
နေ့ချင်းညချင်းပေါ်မှာ Leave နှင့်နံနက်ယံ၌ဆေးကြောပါ။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: သင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်တွင်ဗီတာမင်အီး၏ဆေးတောင့်သုံးစွဲဖို့5နည်းလမ်းများ
3 ။ Alopecia
အဆိုပါAlopecia ကိုအလွန်ယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏရပ်တန့်ရန်ခက်ခဲလှပေမဲ့ နနွင်းနှင့်အခြားဆေးဖက်ဝင်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကုသမှုကြောင့်တားဆီးသို့မဟုတ်လျှော့ချရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
နနွင်းထုတ်ယူ (2 ml) ၏ 10 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
¼ခွက်ကိုမုန်လာဥနီဖျော်ရည် (62 ml)
¼ခွက်ကိုဗာဒံသီး, ဆီ (60 ml)
ထိုအခါ addဗာဒံသီး, ဆီ နှင့်ရောမွှေဖို့ဆက်လက်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မုန္လာဥနီသီးဖျော်ရည်ကို add နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရောမွှေဖို့အရာအားလုံး emulsify ။
ထိုးဖောက်မှုအကူအညီ massaging စဉ်တစ်ခုလုံးကိုဦးရေပြားပေါ်မှာဤကုသမှုကို Apply ။
ကအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲနာရီချန်ထားပါ။ နေ့ချင်းညချင်းလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာပါပဲထိုင်ကြပါစို့။ တဦးတည်းနေတဲ့ရေချိုးခန်းဦးထုပ်များနှင့်မျက်နှာသုတ်ပုဝါအဘို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကုသမှုသို့မဟုတ်23 ကြိမ်တစ်ပါတ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။
အခုဆိုရင်သင်သိ အသားအရေပြဿနာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်သည်ကိုနနွင်း-based3ထိရောက်သောကုသနည်းများ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းအားလုံးသင့်ရဲ့သံသယကိုဖြေရှင်းမယ့်အရေပြားအထူးကုဆရာတစ်ဦးအလည်အပတ်အကြံပြုပါသည်။
နနွင်းနှင့်အတူ5ကြီးမြတ် Anti-inflammatory ကုစား
5 ကြီးမြတ် Anti-inflammatory နနွင်းကုစား။ ဒီအမွှေးအကြိုင်ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝက Anti-inflammatory ဆေးဝါးများကိုဖန်တီးရန်ပြီးပြည့်စုံပါဝင်ပစ္စည်းရှိနိုင်ပါသည်။ Read more »
5 ကုစားရာသီနှောင့်နှေးများအတွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးတစ်လက် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ